नायिका करिश्मा र रेखाको तीज कस्तो? « AayoMail
नायिका करिश्मा र रेखाको तीज कस्तो?
2021,9 September, 5:30 pm
काठमाडौं – हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाले आज तीज मनाउँदैछन्। विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायुको कामना तथा अविवाहितले सुयोग्य वर पाउने कामनाका साथ आज व्रत बसेर तीज पर्व मनाउँदैछन्।
पार्वतीले भगवान् शिव स्वामी पाउँ भनि भाद्रशुक्ल पक्षको त्रयोदशीको दिन कठोर व्रतबसेको र उनको मनोकामना पूरा भएको विश्वासका साथ तीज मनाइने गरिन्छ।
तीज आज भए पनि यसको रमझम केही दिनअघिदेखि नै सुरु भइसक्छ। टोलटोलमा तीजका भाका घन्किइहेका छन्। तर, कोरोना महामारीका कारण पहिलेजस्तो चहलपहल छैन। पशुपतिनाथसहित देशका अधिकांश शिवालय बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा ‘तपाईंहरु कसरी तीज मनाउँदै हुनुहुन्छ?’ भनेर हामीले केही सेलिब्रेटीहरुलाई सोधेका छौं–
आम दिदीबहिनीले जस्तै गरी मनाउँदै छु। मेरो तीज पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीजस्तै हुन्छ। तीजमा परिवारसँग भेटघाट गरेर, दुःख–सुःखको कुरा साटासाट गर्दैछौं। रमाइलो भइरहेको छ।
मेरो तीज पनि अन्य वर्षजस्तै छ। केही फरक छैन। हामी कलाकारको तीज पनि अरुजस्तै हुन्छ, के फरक हुनु र? मलाई कलाकारकोभन्दा पनि अरु दिदीबहिनीको तीज रमाइलो लाग्छ। मेरो पनि त्यही हो, व्रत बस्यो, साथीहरुसँग भेटघाट गर्यो, रमाइलो गर्यो।